Kitra – «Chan 2016» : hiady ny medaly volamena ny Voromahery sy ny Léopards | NewsMada
Kitra – «Chan 2016» : hiady ny medaly volamena ny Voromahery sy ny Léopards
Par Taratra sur 06/02/2016
Ho fantatra, rahampitso, izay handrombaka ny fandresena eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra (Chan 2016). Fihaonana hikatrohan’i Mali sy Repoblika demokratikan’i Kongo.
Ny Voromaherin’i Mali sy ny Léopards avy any amin’ny RD Kongo no hiatrika ny famaranana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Chan 2016). Fihaonana izay hotontosaina ao amin’ny kianja Kigali, Roandà, rahampitso alahady. Sambany ary voalohany eo amin’ny tantarany, ny hiatrehan’ny Malianina ny famaranana.
Raha tsiahivina, nandavo ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, teo amin’ny manasa-dalana, ny Voromaherin’i Mali, ny alakamisy lasa teo. Tamin’ny isa tokana, 1 noho 0, ny nahazoan-dry zalahy ny fandresena, tamin’ity. Baolina tokana tafiditr’i Yves Bissouma, teo amin’ny minitra faha-88.
Lojika ny fandresen’izy ireo ny Elefanta, araka ny fanambaran’ireo mpanao fanadihadiana satria nanjakan’ny Voromahery hatramin’ny farany ny lalao, tamin’ny ankapobeny. Nisy mihitsy ny fotoana nahazoan’izy ireo “penalty”, saingy tsy matin’i Mamadou Coulibaly.
“Lôjika ary mendrika ny fandresena azon’i Mali, izay tena nampiseho ny heriny sy ny fahaizany, nandritra ny lalao. Mirary soa ho azy ireo, amin’ny famaranana”, hoy i Michel Dussuyer, mpanazatra ny Elefantan’i Côte d’Ivoire.
Fanindroany amin’izao kosa ny hiatrehan’ny Léopard ny famaranana, ary mihevitra izy ireo ny handrombaka ny amboara sy ny medaly volamena, ho an’ity andiany fahefatra ity.
Hiady ny laharana fahatelo, eo amin’ny fiadiana ny medaly alimo, kosa amin’ity (Chan 2016) ity, ny Elefantan’i Côte d’Ivoire sy ny Syli Nacional avy any Ginea. Fihaonana hialoha ny famaranana eo amin’i Mali sy Kongo.